‘फाम ट्रिप’ र सरकारको होहल्ला | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय ‘फाम ट्रिप’ र सरकारको होहल्ला
on: July 04, 2019 सम्पादकीय
सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्चेर इन्टरनेशनल मिडिया समिट गर्ने भएको छ । भ्रमण वर्ष २०२० लाई ध्यानमा राखेर विश्वभरिका चर्चित अन्तरराष्ट्रिय मिडियाहरूका प्रतिनिधिलाई नेपाल बोलाएर यहाँका पर्यटकीय गतिविधिबारे प्रचार गराउने लक्ष्य लिएको छ । यस्तो समिटबाट नेपालले आशा गरे अनुसार नेपालको प्रचार होला ? पर्यटक आगमन बढ्ला ? अनि पर्यटनबाट नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहयोग पुग्ला त ?
फाम ट्रिपमा आउने पत्रकारहरूले यहाँ आउँदा भोगेका समस्या पक्कै लेख्लान् । नेपालमा सीधै उडान नभएकाले नेपाल आउन नै २/३ दिन खर्चनु परेको कुरा कुनै न कुनै प्रकारले उनीहरूले उठाउँछन् । नेपाल भित्रिएपछिको नेपालको अवस्था उनीहरूबाट लुकाउन सकिने विषय होइन ।
पर्यटन व्यवसाय बढाउन प्रचारप्रसार जरुरी हुन्छ । यसका लागि विज्ञापनभन्दा पनि विभिन्न मिडियालाई बोलाएर पर्यटकीय क्षेत्र घुमाउने तरीका निकै प्रभावकारी मानिन्छ । फार्म ट्रिप भनिने यस्तो पर्यटनमा सहभागी हुन आउने पत्रकारहरूले आफूकार्यरत मिडियामा लेख/फिचर प्रकाशित गर्छन्, ब्लगमा लेख्छन्, भिडियो सामग्री प्रसार गर्छन् । कतिपय पत्रकारहरूले त आप्mनो भ्रमणकै आधारमा पुुस्तकसमेत तयार पार्छन् । यस्ता फिचर/लेख/भिडियो पढेर वा हेरेर मानिसहरू नेपाल आउन लालायित हुन्छन् । यस्तो फाम ट्रिप विश्वभरि नै चलनचल्तीमा छ । सरकारले फाम ट्रिप नभनेर इन्टरनेशनल मिडिया समिटको नाममा यस्तै खालको कार्यक्रम गर्न लागेको छ । सुन्दा केके न गर्न लागेको जस्तो लाग्ने गरी हल्लाखल्ला गरिएको यो कार्यक्रम कहिले गर्ने हो र कस्तो खालको हो भन्नेचाहिँ स्पष्ट छैन ।
फाम ट्रिपमा आउने पत्रकारहरूले नेपालले चाहेजस्तो गरी मात्रै लेख्दैनन् । उनीहरूले नेपालको सकारात्मक कुरामात्रै लेख्छन् वा चर्चा गर्छन् भन्ने पनि छैन । त्यसैले यसमा सहभागी हुने व्यक्तिको चयनमा पनि यसको सफलता निर्भर हुन्छ ।
धूलो र धूवाँभित्र निस्सासिएको काठमाडौंमा अहिले केही सुधार भए पनि अझै विदेशीले महसूस गर्ने गरी सुधार हुन थुप्रै बाँकी छ । यस्तो धूलो र धूवाँले धूसरित यहाँको सम्पदा देख्नेले सम्पदाको गुणगान मात्रै पक्कै गाउँदैन । यस्ता बेथिति पर्यटन क्षेत्रमा निकै छन् । अझ यहाँ आउने पत्रकार व्यावसायिक हुन्छन्, हामीले नदेखेका कुरा उनीहरू देख्छन्, ती सकारात्मक पनि हुन्छन्, नकारात्मक पनि । यस्तोमा सरकारले पर्यटकले भोग्नुपरेका समस्या समाधान नगर्ने हो भने यो समिटबाट उल्टो नकारात्मक सन्देश जान बेर छैन ।
हो, पर्यटनको प्रचारका लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू आवश्यक हुन्छ । यसका लागि कराडौं रुपैयाँ खर्च पनि हुन्छ । तर, यसबाट जान सक्ने नकारात्मक सन्देश रोक्नेतर्फ भने सरकार चनाखो पनि हुनुपर्छ ।
बीबीसी, सीएनएन जस्ता विश्वप्रसिद्ध टिभी च्यानलहरूले नेपालबारे धेरै नै प्रचार गरिरहेका छन् । नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य भनेर सूचीमा पारिरहेका छन् । यतिमात्र होइन, विश्वका पर्यटनसम्बन्धी सुझाव दिने पत्रिका र अनलाइनहरूले पनि नेपालको विशिष्टताबारे प्रचार गरेकै छन् । तर पनि पर्यटक उल्लेख्य मात्रामा आएका छैनन् । आएका पर्यटक पनि गुणस्तरीय छैनन् । यो किन भइरहेको छ भन्ने राम्ररी अध्ययन नगरी समिट गर्दा परिणाम प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० नै अहिले ओझेलमा परेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री नै पर्यटनमन्त्री पनि बन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण पर्यटन क्षेत्रलाई ध्यान दिन सक्नुभएको छैन । यस्तोमा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बन्नु भनेको भ्रमण वर्षको महŒवलाई नबुझनु नै हो भन्न सकिन्छ । यस्तोमा आयोजना गर्ने भनिएको समिट आइफाजस्तै हावादारी बन्न पनि बेर छैन ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि शैलुङ महोत्सव हुने
झाँक्रीपानीमा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम : पर्यटकलाई बदाम
दाङमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ९० करोडको गुरुयोजना